Madasha Xisbiyada Qaran Oo Digniin Culus U Dirtay Dowladda Federaalka – Banaadir weyne
Madasha Xisbiyada Qaran Oo Digniin Culus U Dirtay Dowladda Federaalka
Muqdisho – Siyaasiyiinta Madasha Xisbiyada Qaran ayaa waxay si adag uga horyimaadeen muddo kororsi ay sameyso dowladda haataan dalka ka jirta, iyadoo laga duulaayo warkii shalay ka soo yeeray Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey), Gudoomiyaha Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka, oo soo bandhigtay laba hab oo dalka uga dhici karto doorasho.
Xaliimo Yarey oo oo hortagtay Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa soo bandhigtay laba hab, oo ay sheegtay in doorashadu ku qabsoomi karto, kuwaa oo kala ah habka diiwaangelinta casriga ah ee Biometric iyo habka diiwaan-gelinta ee Gacanta.
Waxa ay sheegtay in habka koobaad ee diiwaan-gelinta casriga ah haddii la qaato ay Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka u baahan yihiin illaa 13 bilood oo ka bilaabaneysa July 2020-ka illaa August 2021-ka, si ay doorashada baarlamaanku u qabsoomto bisha August ee 2021-ka. Habkan ayay sheegtay inuu u baahan yahay qarash badan iyo waqti dheeraad.
Xaliimo Yarey ayaa sheegtay in habka labaad oo ah habka diiwaan-gelinta ee Gacanta uu yahay mid ka waqti iyo qarashba yar habka koobaad. Habkan ayaa haddii la qaato waxa uu guddiga doorashadu u baahnaan doonnaa muddo 9 bilood oo dheeri ah, oo ka bilaabaneysa July 2020-ka illaa March 2021-ka.
Hadaba Madasha Xisbiyada Qaran ayaa soo jeedisay inay is casilaan Guddiga Doorashooyinka Qaranka, haddii ay ku fashilmeen waajibaadkii qaran ee loo igmaday.
Warsaxaafadeed ay goor dhow soo saareen ayay ku sheegeen in Dastuurka Qaranka uu muddeeyay muddo xileedka Hay’adaha Dowladda, isla-markaana ay Madasha Xisbiyada ka go’an tahay ixtiraamka iyo ku dhaqanka Dastuurka Qaranka.
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa Madaxda Dowladda Federaalka iyo umadda Soomaaliyeedba ku wargelisay in wixii dib u dhac ee ka yimaada muddo kororsi iyo kursi jaceylba, ay qaadi doonaan Madaxda Dowladda.
Halkan hoose baa laga aqrisan karaa Warsaxaafadeedka Madasha Xisbiyada Qaran.
– Universal TV Somali